शीर्षकमा बाइबल पदहरू: खाना -> जीवन
आफ्‍नो बाटो लाग, आफ्‍नो खानेकुरा आनन्‍दसँग खाऊ, खुशी मनले आफ्‍नो दाखमद्य पिऊ, किनभने तिमीले गरेको काममा अहिले परमेश्‍वरको निगाह रहेको छ।
“इस्राएलीहरूको गनगन मैले सुनेको छु। तिनीहरूलाई भन्, ‘बेलुकी तिमीहरूले मासु खानेछौ, र बिहान रोटीले अघाउनेछौ। तब म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्‍वर रहेछु भन्‍ने तिमीहरूले थाहा पाउनेछौ’।”
अनि परमेश्‍वरले भन्‍नुभयो, “हेर, म तिमीहरूलाई पृथ्‍वीका सबै बीउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बीउ हुने सबै फलका रूखहरू दिन्‍छु। ती तिमीहरूलाई आहाराको निम्‍ति हुनेछन्‌।
जीवित-जीवात सबै तिमीहरूका निम्‍ति आहारा हुनेछन्‌। मैले हरिया वनस्‍पति तिमीहरूलाई दिएझैँ सबै थोक म तिमीहरूलाई दिन्‍छु।
यदि तिमीहरू राजी र आज्ञाकारी भयौ भने, तिमीहरूले यस देशका असल-असल कुरा खान पाउनेछौ।
 उहाँलाई सामरिया भएर जानुपर्थ्‍यो। र उहाँ सामरियाको सुखार भनिने नगरमा आइपुग्‍नुभयो। यो नगरचाहिँ याकूबले आफ्‍ना छोरा योसेफलाई दिएका जमिनको नजिकै पर्थ्‍यो। त्‍यहाँ याकूबको इनार थियो। येशू यात्राले थाक्‍नुभएको हुनाले त्‍यस इनारको छेउमा बसिरहनुभएको थियो। प्राय: मध्‍यान्‍ह भएको थियो। एउटी सामरी स्‍त्री पानी भर्न त्‍यहाँ आई। येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “मलाई पानी पिउन देऊ।” उहाँका चेलाहरू सहरमा खानेकुरा किन्‍न गएका थिए। तब सामरी स्‍त्रीले उहाँलाई भनी, “तपाईं यहूदी भएर म सामरी स्‍त्रीको हातबाट कसरी पानी पिउनुहुन्‍छ?” (यहूदीहरूले सामरीहरूसँग केही सम्‍बन्‍ध राख्‍दैनन्‌।) येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “तिमीले परमेश्‍वरको वरदान र तिमीसँग पानी माग्‍ने व्‍यक्तिलाई चिनेकी भए तिमीले उसलाई माग्‍नेथियौ, र उसले तिमीलाई जिउँदो पानी दिनेथियो।” त्‍यस स्‍त्रीले उहाँलाई भनी, “हजूर, तपाईंसित उघाउने भाँड़ो छैन, र इनार पनि गहिरो छ। तब तपाईंले कहाँबाट त्‍यो जिउँदो पानी ल्‍याउनुहुन्‍छ? के तपाईं हाम्रा पुर्खा याकूबभन्‍दा ठूला हुनुहुन्‍छ? उनले हामीलाई यो इनार बनाइदिए, र उनी आफैले, उनका सन्‍तान र उनका गाईबस्‍तुले यही इनारको पानी पिए।” येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “यो पानी पिउने प्रत्‍येक फेरि तिर्खाउनेछ, तर जस-जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्‍यो कहिल्‍यै तिर्खाउनेछैन। जुन पानी म त्‍यसलाई दिनेछु, त्‍यो त्‍यसमा अनन्‍त जीवनको निम्‍ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्‍नेछ!” त्‍यस स्‍त्रीले उहाँलाई भनी, “हजूर, मलाई त्‍यही पानी दिनुहोस्, र म तिर्खाउनेछैनँ, र यहाँ पानी भर्न आइरहनुपर्दैन”। येशूले त्‍यसलाई भन्‍नुभयो, “जाऊ, तिम्रो पतिलाई बोलाएर ल्‍याऊ।” त्‍यस स्‍त्रीले भनी, “मेरो पति छैन।” येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिम्रो पति छैन भनी तिमीले ठीकै भन्‍यौ, किनभने तिम्रा पाँच जना पति भइसकेका छन्, र जो अहिले तिमीसँग छ, त्‍यो तिम्रो पति होइन। तिमीले यो साँचो भनेकी हौ।” त्‍यस स्‍त्रीले उहाँलाई भनी, “हजूर, तपाईं अगमवक्ता हुनुहुन्‍छ भनी म थाहा पाउँछु। हाम्रा पुर्खाहरूले यस डाँड़ामा आराधना गरे, अनि तपाईंहरू भन्‍नुहुन्‍छ, कि आराधना गर्ने स्‍थान यरूशलेम हो।” येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “ए नारी, मलाई विश्‍वास गर, त्‍यो बेला आउँदैछ, जब तिमीहरू न त यस डाँड़ामा, न यरूशलेममा पिताको आराधना गर्नेछौ। तिमीहरू जे आराधना गर्दछौ सो जान्‍दैनौ। हामी जे आराधना गर्दछौं सो जान्‍दछौं, किनभने मुक्तिचाहिँ यहूदीहरूबाट आउँछ। तर बेला आइरहेछ, र त्‍यो बेला अहिल्‍यै हो, जब सच्‍चा आराधकहरूले पितालाई आत्‍मा र सत्‍यतामा आराधना गर्नेछन्‌। किनकि आराधना गर्ने यस्‍तै आराधकहरूलाई नै पिताले खोज्‍नुहुन्‍छ। परमेश्‍वर आत्‍मा हुनुहुन्‍छ, र उहाँका आराधकहरूले आत्‍मा र सत्‍यतामा आराधना गर्नुपर्छ।” त्‍यस स्‍त्रीले उहाँलाई भनी, “म जान्‍दछु, कि मसीह आउनुहुन्‍छ (जसलाई ख्रीष्‍ट भनिन्‍छ), र जब उहाँ आउनुहुन्‍छ, तब उहाँले नै हामीलाई सबै कुरा बताउनुहुनेछ।” येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिमीसँग बोल्‍ने, म उही हुँ।” त्‍यति नै बेला उहाँका चेलाहरू आए, र उहाँलाई एउटी स्‍त्रीसँग कुरा गरिरहनुभएको देखेर छक्‍क परे, तर “तपाईं के चाहनुहुन्‍छ?” अथवा “तपाईं त्‍यस स्‍त्रीसँग किन बातचीत गर्दैहुनुहुन्‍छ?” भनेर कसैले सोधेनन्‌। तब त्‍यो स्‍त्री आफ्‍नो गाग्रो छोड़ेर नगरतिर गई, र मानिसहरूलाई भनी, “आओ, एक जना मानिसलाई हेर, जसले मैले गरेका सबै काम मलाई बताइदिनुभयो। कतै उहाँ नै ख्रीष्‍ट त हुनुहुन्‍न?” तब तिनीहरू नगरबाट निस्‍केर उहाँकहाँ गए। यसै बीचमा चेलाहरूले उहाँलाई यसो भनेर बिन्‍ती गरे, “रब्‍बी, भोजन गर्नुहोस्‌।” तर उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मसित खानलाई भोजन छ, जो तिमीहरूलाई थाहा छैन।” यसकारण चेलाहरूले आपसमा भने, “के कसैले उहाँलाई भोजन ल्‍याइदियो कि कसो?” येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “मलाई पठाउनुहुनेको इच्‍छाअनुसार गर्नु, र उहाँको काम पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो।
 नष्‍ट हुने भोजनको निम्‍ति परिश्रम नगर, तर अनन्‍त जीवनसम्‍म रहने भोजनको निम्‍ति परिश्रम गर, जो मानिसको पुत्रले तिमीहरूलाई दिनेछ। किनभने परमेश्‍वर पिताले उसमाथि आफ्‍नो छाप लगाउनुभएको छ।” तिनीहरूले उहाँलाई भने, “परमेश्‍वरले चाहनुभएको काम गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ?” येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “परमेश्‍वरको काम यही हो: जसलाई उहाँले पठाउनुभयो उसमाथि विश्‍वास गर।” यसकारण तिनीहरूले उहाँलाई भने, “तपाईं के चिन्‍ह देखाउनुहुन्‍छ, सो हामी हेरौं, र तपाईंलाई विश्‍वास गरौं? तपाईं के गर्नुहुन्‍छ? हाम्रा पिता-पुर्खाले उजाड़-स्‍थानमा मन्‍न खाए, जसरी लेखिएको छ, ‘उहाँले तिनीहरूलाई खानलाई स्‍वर्गबाट रोटी दिनुभयो’।” येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “साँच्‍चै, म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, तिमीहरूलाई स्‍वर्गबाट रोटी दिने मोशा होइनन्, तर स्‍वर्गबाट तिमीहरूलाई साँचो रोटी दिनुहुने मेरा पिता हुनुहुन्‍छ। किनभने परमेश्‍वरको रोटी त्‍यही हो, जो स्‍वर्गबाट ओर्लिआउँछ, र संसारलाई जीवन दिन्‍छ।” तिनीहरूले उहाँलाई भने, “प्रभु, यो रोटी हामीलाई सधैँ दिनुहोस्‌।” येशूले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो “जीवनको रोटी म हुँ। मकहाँ आउने भोकाउनेछैन, र ममाथि विश्‍वास गर्ने कहिल्‍यै तिर्खाउनेछैन।
धन्‍य धार्मिकताको निम्‍ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्‍त हुनेछन्‌।
“यसैकारण म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, ‘के खाउँला, के पिउँला’ भनी आफ्‍नो प्राणको निम्‍ति र ‘के लगाउँला’ भनी आफ्‍नो शरीरको निम्‍ति फिक्री नगर।’ के जीवन खानेकुराभन्‍दा र शरीर लुगाफाटाभन्‍दा उत्तम होइन?
द्वेषले भरिएको ठाउँमा मोटो बाछो खानुभन्‍दा प्रेम भएको ठाउँमा सागपातसँग भोजन गर्नु उत्तम हो।
धेरै मह खानु राम्रो हुँदैन, न त आफ्‍नै मान खोज्‍नु कसैलाई आदरणीय हुन्‍छ।
टन्‍न अघाएको व्‍यक्तिलाई मह अमन हुन्‍छ, तर भोकाएकालाई तीतोसमेत मीठो लाग्‍छ।
मानिसको मन आनन्‍दित गराउनलाई दाखमद्य, र त्‍यसको अनुहार चहकिलो पार्नलाई तेल, र त्‍यसको हृदय बलियो तुल्‍याउनलाई रोटी उहाँले दिनुहुन्‍छ।
उहाँले प्रत्‍येक प्राणीलाई आहार दिनुहुन्‍छ: उहाँको प्रेम अनन्‍तकालसम्‍म रहिरहन्‍छ।
१ कोरिन्थी 8:8
तर खानेकुराले हामीलाई परमेश्‍वरको दृष्‍टिमा बढ़ी ग्रहणयोग्‍य बनाउँदैन। नखाँदैमा कुनै हानि छैन र खाँदैमा कुनै लाभ छैन।
१ कोरिन्थी 10:31
यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ, अथवा पिओ, वा तिमीहरू जेसुकै गर, सबै परमेश्‍वरका महिमाको निम्‍ति गर।
१ तिमोथी 4:4-5
 परमेश्‍वरले सृजनुभएको हरेक कुरा असल छ, र धन्‍यवादसाथ ग्रहण गरे कुनै थोक पनि इन्‍कार गरिनुपर्दैन। किनभने त्‍यो परमेश्‍वरको वचन र प्रार्थनाले चोखो तुल्‍याइन्‍छ।
 उहाँले मानिसहरूलाई फेरि आफूकहाँ बोलाएर तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “तिमीहरू सबैले मेरा कुरा सुन र बुझ। यस्‍तो केही कुरा छैन जो बाहिरबाट मानिसभित्र पसेर त्‍यसलाई अशुद्ध पार्न सक्‍छ, तर मानिसबाट बाहिर निस्‍कने कुराहरूले नै मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। [ जसको सुन्‍ने कान छ त्‍यसले सुनोस्‌।” ] मानिसहरूलाई छोड़ेर घरभित्र पसेपछि उहाँका चेलाहरूले उहाँलाई यस दृष्‍टान्‍तको विषयमा सोधे। उहाँले तिनीहरूलाई भन्‍नुभयो, “के तिमीहरू पनि अझै अबुझ छौ? जे बाहिरबाट मानिसभित्र पस्‍छ त्‍यसले उसलाई अशुद्ध पार्न सक्‍दैन भनेर तिमीहरू जान्‍दैनौ? किनकि त्‍यो उसको हृदयमा होइन, तर पेटभित्र पस्‍तछ, र बाहिर निस्‍किहाल्‍छ। (यसरी उहाँले सबै भोजन शुद्ध हो भनी बताइदिनुभयो।) उहाँले भन्‍नुभयो, “मानिसबाट जे बाहिर निस्‍कन्‍छ त्‍यसैले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। किनकि भित्रबाट, अर्थात्‌ मानिसको हृदयबाट खराब विचार, व्‍यभिचार, चोरी, हत्‍या, परस्‍त्रीगमन, लोभ, दुष्‍टता, छल, छाडापन, ईर्ष्‍या, निन्‍दा, घमण्‍ड, मूर्खता निस्‍कन्‍छन्‌। यी सबै दुष्‍ट कुराहरू भित्रबाट निस्‍कन्‍छन्, र मानिसलाई अशुद्ध पार्छन्‌।